Duubista 4K ProRes waxaa kaliya laga heli karaa 13GB iPhone 256 | Wararka IPhone
Duubista 4K ProRes waxaa kaliya laga heli karaa 13GB iPhone 256
Ignacio Sala | 15/09/2021 15:00 | macruufka 15, iPhone 13
Mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee ugu weyn ee ka imanaya gacanta nooc cusub ee iPhone 13 Pro ayaa ah Taageerada qaabka riixa fiidiyowga ee ProRes, sifo ay Apple waqti badan ku bixisay soo bandhigista jiilka cusub ee iPhone 13 Pro laakiin taasi waxay leedahay xad.
Sida aan ku arki karno websaydhka Apple, suurtagalnimada duubista qaabka ProRes ee tayada 4K at 30 loox ilbiriqsi wuxuu ku kooban yahay moodooyinka leh 256GB oo lagu kaydiyo oo lagu daray, isaga oo ka tegaya moodelkii 128 GB, oo ah moodeel kaliya ku isticmaali kara qaabkan qaraarka 1080p.
Apple ma sharaxayo sababta xaddidan, laakiin waxaa loo malaynayaa in shirkaddu tixgelisay in 128 GB oo kaydinta ah aysan ahayn meel ku filan oo lagu kaydiyo faylasha culus ee la soo saaray.
Si kastaba ha ahaatee, haddii uu soo bandhigi karo suurtogalnimada iyo haddii adeegsaduhu doorto inuu adeegsado iyo haddii kale, maaddaama mashaariicda yar -yar lagama maarmaan noqon doonto in la helo meel wax lagu kaydiyo. Waxa cad ayaa ah, adoo raacaya falsafadda Apple, haddii aad rabto inaad ku isticmaasho duubista 4K 30 fps, waa inaad bixisaa.
La farqiga qiimaha u dhexeeya nooca kaydinta 128 GB iyo nooca 256 GB waa 120 euro, qiimo haddii aad diyaar u tahay inaad bixiso 1.159 euro ee iPhone 13 Pro 128 GB ama 1.259 ee iPhone Pro Max oo leh awood wax lagu kaydiyo, ma noqon doonto dadaal dhaqaale oo weyn.
Qaabka ProRes wuxuu bixiyaa a daacadnimada midabka sare oo qaadata meel aad u yar aaladda, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon duubista mashaariicda nus-xirfadeed, ama xitaa xirfadlayaal. Tan waxaa si weyn loogu adeegsadaa qulqulka shaqo-soo-saarka kadib waxaana si fudud loogu dhoofin karaa tifaftireyaasha sida Final Cut Pro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 15 » Duubista 4K ProRes waxaa kaliya laga heli karaa 13GB iPhone 256
Waxaan qabaa su'aal, 4K waxaad kaliya ku isticmaali kartaa ProRes 30fps laakiin ma loo adeegsan karaa 1080p 60fps?
Sawirka aan ka qaatay websaydhka Apple oo aan ku daray maqaalka, waxay muujineysaa inay ku duubi karto qaabka ProRes ee 4K iyo 30 fps, qaraarka oo hoos loogu dhigay 1080 iyo 30 fps nooca 128 GB.
Waqtigan xaadirka ah waxay umuuqataa in qaabkani ku kooban yahay 30 fps, wax laga xumaado.
Waa inaan sugnaa moodooyinka iPhone ee soo socda si ay uga faa'iidaystaan ​​qaabkan oo ah heer sare.
Taxanaha cusub ee Apple Watch 7 wuxuu kor u qaadaa isla processor -ka sida Taxanaha 6